Fandefasana poizina nataon'i RWBY, sy ny adihevitra momba ny famonoan-tena - Hafa
Fandefasana poizina nataon'i RWBY, sy ny adihevitra momba ny famonoan-tena (Andao hamafana zavatra vitsivitsy)
Orinasa Mecha dia miorina any Angletera, ka eo amin'ny 9:50 maraina eo am-panoratako izao.
Rehefa milaza ny olona fa misy poizina ny fandoman'ny anime RWBY'SY tsy mandainga izy ireo. Tena fanbase misy poizina izy io.
Toa omaly alina be dia be ny tantara an-tsehatra niely taorian'ny namoahany vaovao ny heverina ho famonoan-tena amin'ny tovovavy iray mifandraika amin'ny fanbase an'i RWBY.
Ity vaovao ity dia nalaina avy tao Hero Hey's Fantsona YouTube, toerana niresahany zavatra mitovy.
Misy vaovao androany momba ny tovovavy iray, Cleo, izay voalaza fa namono tena noho ny fanenjehana nataon'ny #RWBY fiarahamonina. Ity ny bilaogy miresaka ny zava-nitranga raha te hamaky azy ianao ary mamorona ny hevitrao manokana. https://t.co/oKvNbQ5EbC
Misaotra anao @SparrowsAlbion amin'ny fizarana an'ity
- HeroHei (@_Hero_Hei_) 6 Novambra 2019
Betsaka ny fampahalalana nangonina tao amin'ny lahatsoratra omaly no nalaina avy amin'ny kaonty tovovavy 'Tumblr', ny Twitter-ny, ary ireo bitsika hafa miresaka zavatra mitovy.
tw: famonoan-tena, fifandraisana misy elanelana.
hey @RoosterTeeth , ny fandomanao rwby dia nanolo-tena tamin'ny famonoan-tena ara-bakiteny zazavavy iray ankehitriny noho ny sambo “tsy mendrika”, azafady azafady mba mahazo masinina avy any aminareo ve? lasa lavitra loatra ny fanjakan'ity fndm ity. https://t.co/iL3ggXD981
- adam stannie (@owletarc) 6 Novambra 2019
Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony an'ny tovovavy izay nanomboka ity fifanolanana ity, mamafa ny kaontiny izy.
Ny famonoan-tena RWBY dia HOAX rehetra HATERANA
Nanamboatra lahatsoratra iray manontolo momba izany izy ireo, izay mila havaozina na hofoanana izao https://t.co/c7qeU5nHHz
- ZEpicTeam (@ MemeZilla07) 7 Novambra 2019
Misy olona mila mihazona ireo olona ireo ary mampahafantatra azy ireo fa fitaka izany https://t.co/9sxB6BX9i6
- TheLastSuperSaiyan & # x1f41d; & # x1f41d; & # x1f5a4; & # x1f49b; EAGLES BLACK (@ Thelastsupersa2) 7 Novambra 2019
BONDRIKA marobe no tonga tondra-drano momba ilay resaka fitaka. Na amin'ny teny hafa - ahoana ny fanbase an'i RWBY's dia misy poizina tokoa.
Poizina tokoa raha ny marina fa vonona ny handeha IZANY izy ireo mba hitarika olona hafa ao amin'ny fiarahamonina.
Na ny mailaka momba ny hosoka amin'ny famonoan-tena RWBY aza dia nanomboka tonga
Araka ny voalaza hoe:
“Salama aho te hiteny fotsiny hoe voamarina izany fa laoka izany. Misy lahatsoratra porofo marobe ary tsy misy akory i Cleo.
Toy ny olona iray izay namoy ny namako akaiky noho ny famonoan-tena ary ny tenany izay tafavoaka velona dia nahatezitra ahy ny nahita fa sandoka. Ny fampijaliana dia olana iray ary antony lehibe mahatonga ny zavatra toa an'io fa ity olona ity dia namorona sary Photo shopping ny lahatsoratra tany am-boalohany izay hitako.
Ilay olona nandefa tamin'ny anaran'ny olona ity dia manana kaonty 4 na mihoatra. Misy lahatsoratra antsipiriany 2 momba ireo fikarohana porofo ireo. Te-hamoaka an'io fotsiny aho eto hoe famitahana ity. “
Ny antony nitoriako ity vaovao ity voalohany
Voarakitra tsara ny fisian'ny fandom-poko RWBY’S misy poizina mihoatra ny finoana.
Betsaka ny olona no nivoaka tao amin'ny Twitter niresaka momba izany. Na ny olona ao amin'ny orinasa aza.
Omaly tamin'ny 6 Novambra, Vaovao vaovao 3 no navoaka:
Hira Theme Anime malaza 22 amin'ny fararano 2019 (naoty Japon)
Kyoto Animation mizara hafatra mandratra fo hanomezam-boninahitra ireo niharam-boina (hetsika fahatsiarovana)
Namono tena ny zazavavy iray taorian'ny nampijalian'i RWBY Fanbase (Vaovao Mampalahelo)
Andro 'mahazatra' io. Ary noheveriko ara-moraly fa ilay TSARA zavatra tokony hatao hizarana ny vaovao momba ilay antsoina hoe 'famonoan-tena'.
Nefa mazava ho azy fa fahadisoana lehibe izany
Ny zazavavy izay nanomboka izany rehetra izany dia ambany noho ny sh * t. Indrindra rehefa fantatro manokana tena matotra tokoa ny famonoan-tena ary ny fiantraikan'izany amin'ny olona rehetra mifandray amin'ilay niharam-boina.
Tsy miteny am-pahatsorana aho amin'ny fomba ampiasana ireo sehatra toa ny Twitter ho an'ny sh * t toa an'io, izany rehetra izany dia noho ny fikapohana ego.
Fanbase misy poizina RWBY'S dia tena izy.
Fonosina ity amin'ny firesahana ity bitsika RIDICULOUS ity:
Yo @_Hero_Hei. Nisy vorona kely nilaza tamiko fa vola be no naloa taminao https://t.co/4k1wkHugMz hamoronana hosoka momba ny famonoan-tena sandoka ho an'ny tovovavy sandoka antsoina hoe Cleo mba hahafahanao manao ireo mpandefa ho ratsy tarehy sy mahazo fomba fijery misimisy kokoa ho an'ny fantsonao. Mikarakara hamaly ny famotsoran'i Dramaalert?
- legoguy515 (@ legoguy515) 7 Novambra 2019
Voalohany indrindra avelao aho hiteny - Tsy fantatro manokana ny Hero Hei.
ARY tsy mifandray amin'ny orinasa Mecha izy na izany na tsy izany.
Fantatro hoe iza izy ary inona no ataony, fa ny fiheverana ny hoe 'vola karama ra no namoronana vola hosoka' dia bullsh * t tanteraka.
Izay manaraka ny Mecha Company na izaho manokana dia mahalala fa TSY ity karazana zavatra ho hitanao ity.
Ny vaovaom-baovao rehetra dia raisina ara-organika, ary tsy misy olona mahazo karama * hamoaka vaovao amin'ity tranonkala ity.
Na dia tsy hitako aza i Hero Hei manao an'io karazan-dahatsary io mba 'hahatonga ny mpandefa ho ratsy' (manantena aho fa tsy).
Na izany na tsia…
Tsy hitranga eto izany ary tsy mbola nisy toy izany.
Raha io voalaza io - ity dia lesona nianarana
Misaotra an'izay rehetra nanohina sy niresaka momba izany.
Natory i UK tamin'io fotoana io, fa farafaharatsiny efa voaresaka izao ary apetraka am-pandriana.
Karazana mpankafy 7 izay mahasarika ny fiarahamonina Anime